Ahmadinejad sy i Chavez: ”Miala Any ny Resa-Pitiavana’ · Global Voices teny Malagasy
Ahmadinejad sy i Chavez: ”Miala Any ny Resa-Pitiavana’
Voadika ny 28 Oktobra 2018 16:38 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, 日本語, Español, 繁體中文, 简体中文, English
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Novambra 2007)
Tamin'ny herinandro lasa teo, nanao ny fitsidihany fahefatra tao anatin'ny roa taona tao Tehran ny filoha Venezoeliana Hugo Chavez mba hanasonia fifanarahana ara-toekarena bebe kokoa miaraka amin'i Iràna. Milaza ny filoha Iraniana, Mahmoud Ahmadinejad, sy i Chavez fa ”mifampidera” izy roa tonta. Miantso an'i Iràna ho toy ny trano faharoa ho an'ny filoha Venezoeliana i Ahmadinejad, ary manome ny fanohanany ho an'ny governemanta Iraniana i Chavez.
Tamin'ny taona lasa, notsikerain’ireo Iraniana mpianatra sy blaogy maro mpomba ny havia ilay fifandraisana mpinamana nisy teo amin'ilay filoha ”sosialista” Chavez sy ny Repoblika Islamika, izay namonoana sosialista mpikatroka maro taloha .
Nanoratra mikasika ny fifandraisana ara-pirahalahiana eo amin'i Chavez-Ahmadinejady i Jomhour, blaogera malaza tsara avy ao Iràna, sy i Anthony Loewenstein, blaogera sady mpanoratra avy any Aostralia, ary namoaka ilay sariitatra etsy ambony i Nikahang, mpanao sariitatra sady blaogera malaza.
Fandriampahalemana inona, filaminana inona?
Milaza i Jomhour [Fa] fa taorian'ny nihaonany tamin'i Chavez, nihoraka i Ahmadinejad hoe: ”Anananay ny drafitra hanapariahana ny fandriampahalemana sy ny filaminana ho an'ny firenena rehetra .”
Manoratra ilay blaogera:
Toa niova be na tena naverina nosoratana ny famaritana ny fandriampahalemana sy ny filaminana! Ahoana no ahafahan'i Ahmadinejad sy i Chavez hitondra filaminana sy fandriampahalemana ho an'ny firenena hafa raha toa ka izy ireo no mametraka olana sy zava-doza amin'ny vahoakany! … Any amin'ireo Firenena roa ireo, tsy ixsy tena heviny no ambaran'ny teny. Rehefa milaza i Ahmadinejad fa tena misy fandriampahalemana tanteraka any Iràna, ary haparitaka any amin'ny firenena hafa ny filaminana sy ny fandriampahalemana, toa hanihany no fahenoana izany.
Milaza ilay blaogera fa niteraka olana ho an'ny demokrasia sy ny fahalalahana ao anatin'ny fireneny i Chavez, ary anitsakitsaka ny zo fototra maha-olombelona ny governemantan'i Ahmadinejad sady mamoritra ireo mpikatroka avy amin'ny fiarahamonin'olontsotra.
Manoratra i Anthony Loewenstein:
Nandritra ny fitsidihako tao Iràna tamin'ny volana Jona tamin'ity taona ity, voamariko ireo fifandraisana tsy mazavazava misy eo amin'ilay Amerikana Latina havia sy ny fitondran'i Mahmoud Ahmadinejad. Tena nangina be ny havia iraisam-pirenena mikasika ity olana ity, mandà ny hanakiana ilay mpitondra venezoelana Hugo Chavez tamin'ny fipetrahany hatrany amin'ilay Repoblika Islamika.
Namelabelatra izany hevitra izany ny namako, mpanao gazety, Rodrigo Acuna:
”Amin'ny maha-mpikambana azy ao amin'ny Fikambanan'ny Firenena Mpanondrana Solitany, na atao hoe voajanahary be ho an'i Venezoelà aza ny fananana fifandraisana ara-politika sy ara-barotra amin'ny firenena OPEC iray toa an'i Iràna, tsy manelingelina fotsiny ihany fa mahamenatra ny nanolorana an'i Ahmadinejad ny Rojon'ny Fikambanan'ny Mpanafaka — ny voninahitra ambony indrindra fanomen'i Venezoelà an'ireo olomanankaja tonga mitsiidika — toy ny nataon'i Chávez tamin'ny volana Septambra tamin'ny taona lasa teo.”
Manampy izy, ”ho an'ireo mpanohana fatratra an'i Venezoela avy amin'ny Havia iraisam-pirenena kosa anefa, tsy afaka manao hadisoana mihitsy ilay Filoha mpanasonia. Tsy ao anatin'ny rakibolan'izy ireo ny teny hoe ‘fifanoherana’ sy ny ‘tsy firindran-kevitra”.